Chromebook: Inofambiswa ne AMD Ryzen uye Athlon 3000 Series | Linux Vakapindwa muropa
Parizvino, malaptop eGoogle, ane mukurumbira Chromebook nehurongwa hwekushandisa ChromeOS (ine Linux kernel), vanga vari nzvimbo umo maIntel chips chete, akadai seAtom, Pentium, uye Celeron, pamwe neARM-based chips, vakakwanisa kupinda. Asi AMD yaive mutorwa zvachose kune zvikwata izvi ...
Izvo izvo zvachinja neZen nyowani, senge iyo Ryzen 3000 Series uye AMD Athlon 3000 Series. Iwo machipisi anogona kutanga kupa magetsi anotevera Chromebook malaptop, iri zano rakanaka kune vateveri vefemu yakasvibira iyo inoda imwe yeaya malaptop kubva kuGoogle.
Sekureva kwe AMD, kutengesa kwezvikwata izvi hakuna kumira kuwedzera kubvira 2013, zvakanyanya ikozvino ne teleworking uye kure kure zvidzidzo munguva dzehosha. Muchokwadi, haisi nguva yekutanga kuti maChbookbook ave seimwe yezvakakurumbira zvigadzirwa maererano nekutengesa kuAmazon. Uye ndezvekuti ivo vanopa yakagadzika, yakasimba, uye yakachengeteka kwazvo sisitimu yekushandisa, inoenderana neApple maapplication, akasanganiswa zvakanaka neGoogle's cloud services, uye zvakachipa.
Muna 2019 maive ne 8.1% kuwedzera mukutengesa kwezvinhu izvi, uye saka inzvimbo ine muto ye AMD, ndosaka yakaunza matatu mapurosesa eChannelbook
Ryzen 7 3700C, inova ndiyo ine simba kupfuura zvese. Iine 1.4Ghz Radeon mifananidzo uye gumi mifananidzo yemifananidzo. Kubva paZen + uye kugadzirwa mu10nm.
Ryzen 5 3500C, wepakati. Iine yakabatana 1.2Ghz Rdeon GPU ine 8 giraidhi cores. Kubva paZen + uye kugadzirwa ne12nm.
Ryzen 3 3259C, iko kuita kwakaderera pane kwevatatu. Iine 1.2Ghz Radeon GPU uye 3 mifananidzo yemifananidzo. Kubva paZen + uye kugadzirwa mu14nm.
Asi pane mamwe machipisi inowanikwa kubva ku AMD yeChannelbook, ino nguva kune avo vasingade kuita kwakawanda
Athlon 3150C, yakavakirwa paZen uye yakagadzirwa ne14nm node. Ichave ne2 cores uye 4 tambo. Iyo yakabatanidzwa GPU ndiyo iyo Radeon 1.1Ghz tri-core mifananidzo.
Athon 3050C, yakavakirwa paZen uye yakagadzirwa ne14nm photolithography. Ichave iine 2 cores uye isina SMT (2 waya). Iyo yakasanganiswa GPU ndeye Radeon 1.1Ghz mbiri musimboti.
Ese mashanu machipisi ane 15w TDP, yakanaka kune iyi mhando yemabhuku.
Mhando dzakadai Lenovo, HP uye ASUS uchave mutariri wekuunganidza maChomebook neADD ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chromebook: Inofambiswa ne AMD Ryzen uye Athlon 3000 Series